Published May 3, 2021 at 8:54 PM CDT
Waaxda Booliska Magaalada Sioux ayaa dib u eegis ku sameyneysa dhacdo ka dhacday horaantii Khamiista magaalada Perkins oo u dhow magaalada Sioux City. Waaxdu waxay sidoo kale sii deysay kamaradda jirka dhacdada. Muuqaal kooban oo baraha bulshada lagu soo bandhigayay ayaa muujinayay loolan u dhexeeya saraakiisha iyo nin Madoow ah.
Hal mar ayaa ninkii lagu riixay waab uu sarkaal ku tilmaamayo taser isaga. Wuxuu wajahayaa eedeymo ay ka mid yihiin ku xad gudub iyo faragelinta falalka rasmiga ah. Hal sarkaal ayaa kudhamaaday dhaawac garabka ah.
Waaxda Iowa ee Caafimaadka Dadweynaha ayaa soo warineysa toddobo qof oo kale oo Iowans ah inay u dhinteen dhibaatooyinka COVID-19. Tirada kiisaska cusub waxay hoos ugu dhacday ilaa 130 gobolka oo dhan iyadoo seddex ka mid ah ay ku jiraan Degmada Woodbury.
Iowa ayaa diideysa ku dhowaad saddex meelood seddex meelood oo tallaalka tallaalka ah ee ay gobolka ka heli karto dowladda federaalka. Taasi waa sababta oo ah baahida loo qabo toogashada ayaa wali daciif ah.
Daraasad bille ah oo cusub ayaa muujineysa dhaqaalaha sagaal gobol oo Midwest iyo Plains ah, oo ay ku jiraan Iowa, South Dakota, iyo Nebraska, ayaa dib ugu soo noolaanaya nolosha ka dib faafida.
Jaantuska guud ee sahanka ayaa kor ugu kacay akhriskiisii ​​ugu sareeyay tan iyo markii uu bilaabmay ku dhawaad ​​soddon sano ka hor.
Bishii Abriil waxay ahayd bil qalalan guud ahaan gobolka Iowa iyada oo waqooyi-galbeed Iowa ay ugu qallalan tahay sida ay sheegtay Kormeeraha Abaaraha ee Mareykanka. Qeyb weyn oo ka mid ah gobolka waxay ku jirtay abaar daran oo leh seddex degmo oo saameynta ugu badan ay ku yeelatay: Sioux, O'Brien, iyo Clay. Degmada Woodbury waxaa loo arkaa si aan caadi ahayn oo qallalan sida ku xusan cusbooneysiintii ugu dambeysay usbuucii hore. Si kastaba ha noqotee, dhawaanahan gobolka wuxuu wajahay xitaa heerar heer sare ah oo abaar ah.
Waaxda Booliska Magaalada Sioux ayaa sheegtay in tuhmane dil-ismiidaamin ah uu galaaftay nolosha lamaane Sioux City ah shalay.Baarayaasha ayaa sheegaya in…